सूचिकृत नै नभएको एनसेलले शेयरबजार घटायो ! निगरानी -
सूचिकृत नै नभएको एनसेलले शेयरबजार घटायो !
काठमाडौं । बजारमा सूचिकृत ठूला कम्पनीमा हुने व्यवस्थापकीय गतिविभिका कारण कम्पनीको शेयर मूल्यमा असर पर्न गई समग्र शेयर बजारमा नै असर गर्नु नौलो होइन । नेप्सेमा सूचिकृत ठूला कम्पनीहरुको गतिविधिका कारण समग्र बजारको कारोबार र परिसूचकमा असर पर्ने गरेकै छ । तर बजारमा सूचिकृत नै नभएको कम्पनीले बजारमा उथुलपुथुल ल्याउनु भने अचम्मको विषय बनेको छ । अहिले बजारमा भइरहेको तीव्र गिरावटको कारण अरु केही नभएर मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल हो । निजी स्वामित्वको यस कम्पनीको लाभांशसम्बन्धी अदालतको निर्णयसँगै बजार तीब्र रुपमा घट्न थालेको हो ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएका समाचारहरु बाहिर आइरहँदा सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभ प्रकरणमा मुछिएको एनसेलले कमाएको नाफाबाट वितरित लाभांश रक मभने विदेश पठाउन पाउने आदेश सुनाएपछि करिब ८० अर्ब रकम बाहिरिन लागेको छ । यसले गर्दा नेपालका ठूला बैंकहरु नै तरलताको समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
मंगलबार नबिल बैंकले ठूला निक्षेपकर्तालाई १३ प्रतिशत भन्दा माथि ब्याज दिने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरेको समाचार बाहिर आएसँगै यसले बजारमा हंगामा मच्चिएको हो । नबिलले कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतका केही निक्षेपकर्तासँग सम्झौता गरेको भन्दै अन्य बैंकहरु आफ्नो खाताबाट ठूलो रकम बाहिरिनसक्ने भयले त्रसित बनेका छन्, यसले गर्दा बैंकहरु कमजोर बन्ने भय एकातर्फ देखियो भने अर्कोतर्फ ब्याजदर त्यो तहमा पुग्न थालेपछि लगानीकर्ताहरुले बिक्री बढाएका हुन् । केही दिनकाे निरन्तर गिरावटसँगै सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको बजार एनसेल प्रकरणपछि अझै केही समयसम्म सुधार हुने छाँट देखिएको छैन ।
चालु आवभित्रै ती कम्पनीले आईपीओ जारी गरी तोकिएको चुक्तापुँजी पु¥याउने तयारी गरिरहेको...
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।...
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्तको आईपीओमा ९१ प्रतिशत बढी आवेदकलाई रित्तो हात फर्कनुपर्ने भएको...
‘स्टक मार्केट २५००० पुग्यो, मेरो नेतृत्वको अर्थतन्त्रमा राम्रोमात्र हुँदैछ’ : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्वको अर्थतन्त्रले राम्रोमात्र...
शेयर बजारमा २० अंकको ‘करेक्सन’, एकैदिन उचालिएको नेप्से फेरि किन ओरालो ?
काठमाडौं । बुधबार बजार परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा २०.६३ अंकले घटेर १४१६.६१ अंकमा...
नेप्से परिसूचक आकाशियो, एकैदिन ४४ अंक माथि उक्लिँदा कारोबार किन न्यून ?
काठमाडौं । अँग्रेजी नयाँ बर्षको पहिलो दिन आज सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक नेप्से भारी...
स्टक ब्रोकरको दोहोरो चरित्र : आयकरमा सेवा क्षेत्र, भ्याटमा वित्तीय क्षेत्र ?
बढ्दो सरकारी खर्च पूरा गर्न अबको सरकारले तुलनात्मक रुपमा कर लोचदार क्षेत्रलाई बढी ध्यान...
कारोबारको एक घण्टामै नेप्सेमा १.१५ प्रतिशतको गिरावट
काठमाडौं । मंगलबारको बजार परिसूचक एकै घण्टामा १.१५ विन्दुले तल झर्दा बजार १६.९३ अंकले तल...
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम १ को इकाई कारोबार किन भयो राेक्का ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटलको पहिलो म्युचुअल फण्ड योजना सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ...